योगेश र गोकर्णलाई मन्त्री बन्नबाट यसरी छेकियो, को हुन् ती पात्र ? « Ok Janata Newsportal
योगेश र गोकर्णलाई मन्त्री बन्नबाट यसरी छेकियो, को हुन् ती पात्र ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार बेलुकासम्म माधव नेपाल पक्षका नेताहरु योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर आफूतिर तान्ने प्रयत्नमा थिए । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराई र विष्टसँग कुराकानीसमेत गरेका थिए ।
योगेश मन्त्रिपरिषदमा आए गृहमन्त्रालय नै दिने ओलीको भित्री तयारी थियो । यसरी भट्टराईलाई ल्याउँदा माधव–झलनाथ समूह कमजोर बन्ने र अरु नेताहरु पनि आफ्नो पक्षमा आउन सहयोग पुग्ने ओलीको विश्वास थियो । तर, विहीबार मन्त्रीहरुको नाम घोषणा हुँदा माधव पक्षका गणेश पहाडीको नाममात्रै आयो, योगेश र गोकर्णचाहिँ छुटे ।
पछिल्लो समय भट्टराई र विष्ट पनि ओलीप्रति केही लचक जस्तै देखिएकाले ओली दुवै नेता आफूतिर आउनेमा ढुक्कजस्तै थिए । तर, ओलीसँगको कुराकानीमा भट्टराई र विष्ट महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाए पनि नजाने भन्दै पछि हटेका थिए । ओली पक्षका नेताहरुको विश्लेषणअनुसार यसको कारक हुन्– उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठ ।
भट्टराई र विष्ट दुबै नेकपा एमालेको सचिव भइसकेका पदाधिकारी हुन् । पार्टीको पोर्टफोलियोमा उपप्रधामन्त्री महासेठ एमालेमा योगेश र गोकर्णभन्दा जुनियर नेता हुन् । आफूभन्दा जुनियर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएकाले पार्टीका सचिवद्वय भट्टराई र विष्टले मन्त्री बन्न अप्ठ्यारो महसुस गरेको ओली पक्षका नेताहरुको बुझाइ छ ।
एमाले नेताहरु भट्टराई र विष्ट नवौं महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित पार्टी सचिव हुन् भने महासेठ मनोनित केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री बनाइसकेपछि सचिवद्वय भट्टराई र विष्टलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
रघुवीरका कारण भट्टराई गृहमन्त्री बन्न तयार नभएको ओली पक्षका नेताहरुले बताए पनि एमाले नेता भट्टराईले भने बुधबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै ‘माधव–झलनाथसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता साझेदारी गर्ने केपी ओलीको नीतिप्रति आलोचना गरेका थिए । साथै उनले शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेकोमा माधव र झलनाथको पनि आलोचना गरेका थिए ।
‘कमरेड केपी ओली आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड जेएन खनाल र कमरेड माधव नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार नहुने तर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘कमरेड जेएन खनाल र माधव नेपाल आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग मिल्न तयार नहुने तर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्रसँग सत्ता साझेदारी र अन्य विषयमा गठबन्धन गर्न तयार हुने । कसले, किन र केका लागि गर्दैछ यो सब ?
योगेशले भनेका छन्, ‘एमाले एकताको समस्याको मूल जड यहीँ छ । यस विषयमा कमरेडहरुबीच गम्भीर छलफल हुनु र साझा निष्कर्षका साथ साझा अभियानमार्फत एमालेको एकता बचाउन जरुरी छ ।’
यसैबीच, एमाले नेता गोकर्ण विष्टले आफू मन्त्रीका लागि लालायित नभएको बताएका छन् । मन्त्री बन्न लागेको भनेर चलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको विष्टले रातोपाटीलाई बताए ।
आफू एमाले पार्टी जोगाउनमै केन्द्रित भएका बेला मन्त्री बन्न्न लागेको भनेर चलाइएको प्रचारवाजीमा कुनै सत्यता नरहेको विष्टले बताए ।
‘म तीनपटक केन्द्रीय कमिटीमा आएँ । २१ बर्ष अघिदेखि सांसद छु । धेरैचोटि मन्त्री पनि भइसकेको छु’ विष्टले भने, ‘मन्त्रीका लागि मैले कुुनै रहर गर्नुपर्ने अवस्था छैन र यस्तो प्रचारमा कुनै सत्यता छैन ।’